शुरुआतीहरूको लागि उत्तम पोकर सुझावहरू - Victor Mochere
के राम्रो छ र के होइन भनेर हामी धेरै पोकर सुझावहरू फेला पार्न सक्छौं, तर वास्तवमा पोकर रणनीति सिक्न र यस खेललाई लाभदायक बनाउनको लागि तपाईंले आफ्नो यात्राको सुरुमा के सिक्नु पर्छ भनेर छुट्याउन आवश्यक छ। यदि तपाइँ भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो लेखले तपाइँलाई बाटोमा धेरै समय र पैसा बचत गर्नेछ। हामीले जीवनको लागि व्यावसायिक रूपमा पोकर खेल्ने पूर्ण शुरुवातबाट सबै चरणहरू पार गर्यौं।
यहाँ शुरुआतीहरूको लागि उत्तम पोकर सुझावहरू छन्।
1. नियम, स्थिति र पोकर ह्यान्ड्स रैंकिंग सिक्नुहोस्
2. पोकर रणनीति बुझ्न कम दांव मा सुरु गर्नुहोस्
3. उत्कृष्ट खेलहरू फेला पार्नुहोस्
4. कडा तर आक्रामक खेल्नुहोस्
5. स्थिति प्रयोग गर्नुहोस्
6. एउटा टेबल खेल्न सुरु गर्नुहोस्
7. तपाईलाई राम्रो लाग्दा मात्र खेल्नुहोस्
8. पोकर बाधाहरू सिक्नुहोस्
9. आफ्नो विरोधी कार्ड बारे सोच्नुहोस्
10. आफ्नो समय लिनुहोस्
11. धेरै ब्लफ नगर्नुहोस्
12. तह गर्न सिक्नुहोस्
13. सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्
स्वाभाविक रूपमा, यो पहिलो चरण हो जुन तपाइँ लिन चाहानुहुन्छ र धेरै खेलाडीहरूले बुझ्दछन्। सामान्य पोकर नियमहरू सिक्ने क्रममा सजिलो हुन सक्छ, तपाईंले वास्तवमै पोकर ह्यान्ड र्याङ्किङ के हो भनेर बुझ्न केही समय खर्च गर्नुपर्छ। तपाईं हातको बीचमा भएको ठाउँमा हुनुहुँदैन र तपाईंले आफ्नो फ्लशले सीधा पिट्दै हुनुहुन्छ वा होइन भनेर सोच्नु पर्छ र त्यसमा तपाईंको बहुमूल्य निर्णय समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। पोकर ह्यान्ड रैंकिंग यसरी देखिन्छ:
पोकर हात रैंकिंग चार्ट
सिक्ने स्थिति अमूल्य छ र तपाईंले त्यो गर्नु अघि खेल्न सुरु गर्नु हुँदैन। तपाईंले सायद पहिले नै सुन्नु भएको छ, यदि तपाईंले पहिले खेल्नुभएन भने, त्यो स्थिति पोकरमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोकर सुझावहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंले सुरु गर्दा सिक्न आवश्यक छ। त्यसैले यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। सामान्यतया, यदि तपाइँसँग अन्य खेलाडीहरूमा स्थिति छ भने यसको मतलब तपाइँ उनीहरू पछि अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ र यसले तपाइँको निर्णय गर्नु अघि उनीहरूले के गर्छन् भनेर हेर्न सक्षम गर्दछ।
यो जानकारीको एक ठूलो भाग हो, जुन तपाईंले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि यदि तिनीहरूले बाजी वा जाँच गर्छन्, उनीहरूले निर्णय लिन कति समय लिन्छन् र उनीहरूले कुन साइज प्रयोग गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, तपाईंको प्रतिद्वन्द्वीले चाँडै जाँच गरेको देख्दा उसको कमजोर हात भएको राम्रो सङ्केत हुन सक्छ र तपाईंले त्यो थाहा पाएर ब्लफ गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, तर एउटा कुरा प्रस्ट छ- त्यो जानकारी आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई दिनुभन्दा हेर्नु राम्रो हुन्छ।
जब तपाईं पोकर रणनीति सिक्नको लागि तयार हुनुहुनेछ पोकर खेलहरूमा पोजिसन हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सम्झनुहोस् र तपाईंले स्थितिमा हुँदा धेरै हातहरू खेल्नुपर्छ। तपाईंले खेल्ने निर्णय गर्ने हातहरू तपाईंमा भएको स्थितिले धेरै हदसम्म प्रभावित हुन्छन्। पछिको स्थितिमा तपाईंसँग जति धेरै हातहरू छन् तपाईंले खोल्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना विरोधीहरूलाई धेरै दबाब दिन सक्नुहुन्छ।
रोयल फ्लश - A Royal Flush Ace, King, Queen, Jack, 10, सबै समान सूटबाट बनेको छ
सीधा फ्लश - स्ट्रेट फ्लस भनेको लगातार पाँचवटा कार्ड हो, सबै एउटै सूटमा
चार प्रकारको - एक प्रकारको चार चार सूट मध्ये प्रत्येक एउटै कार्ड हो
पूरा घर - फुल हाउस भनेको एउटै हातमा भएको जोडी प्लस तीन प्रकारको हो
फ्लस - फ्लस भनेको एउटै सूटमा भएका पाँचवटा कार्ड हो, संख्यात्मक क्रममा होइन
सीधा - एक सीधा संख्यात्मक क्रममा पाँच कार्ड हो, तर एउटै सूटमा होइन
तीन प्रकारको - तीन प्रकारका एक कार्ड मध्ये तीन र दुई गैर-जोडा कार्डहरू
दुई जोडी - दुई जोडी दुई फरक जोडी वा एउटै हातमा एउटै कार्डको सेट हो
एक जोडी - एक जोडी एउटै कार्ड को एक जोडी हो
उच्च कार्ड - उच्च कार्डले कुनै मिल्दो कार्ड नभएको हातलाई जनाउँछ
तपाइँको खेलहरूमा जम्प गर्नु अघि सधैं यो पोकर टिपलाई विचारमा लिनुहोस्। धेरै खेलाडीहरूले कम खेलहरू खेल्न कुनै चासो पाउँदैनन्, तर तपाईंले आफ्नो लक्ष्य पोकर रणनीति सिक्नु हो र त्यो गर्दा पैसा बर्बाद नगर्नु हो भनेर हेर्नु पर्छ। त्यसकारण, तपाईंसँग कम दांवमा सुरू गर्नका लागि केही कारणहरू छन्:
सबैभन्दा पहिले, तपाईंले धेरै पैसा जोखिममा लिइरहनुभएको छैन भनी थाह पाउँदा धेरै सहज महसुस गर्नुहुनेछ र यदि तपाईंले सुरुमा केही गुमाउनु भयो भने पनि यसले तपाईंलाई हानि गर्दैन। तपाइँ खेल सिक्न सक्षम हुनुहुनेछ र प्रक्रियामा धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्न त्यसैले यो राम्रो विचार हो
दोस्रो, खेलाडीको सीप स्तर हरेक पटक बढ्छ जब तपाइँ दांव माथि जानुहुन्छ। सबैभन्दा न्यून सीमाबाट सुरु गर्दा तपाईलाई कमजोर खेलाडीहरू विरुद्ध खेल्न र अहिले धेरै राम्रो भएकाहरूलाई पैसा दान गर्नुको सट्टा खेल सिक्न दिन्छ।
अन्तमा, यसले तपाईंलाई सम्पूर्ण तस्विर हेर्न र पूरै खेल कस्तो देखिन्छ भन्ने महसुस गर्न सक्षम बनाउँछ। तपाईंले स्थितिहरू बुझ्नुहुनेछ, तपाईंले कुन पोकर हातहरू खेल्नुपर्छ र सबै कुरा अभ्यासमा लिन सक्नुहुन्छ
माथि जानु अघि तपाईंले पोकर रणनीति सिक्नुपर्छ र तपाईंले खेल्ने कुनै पनि खेलमा सहज महसुस गर्नुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यो तल्लो दांवमा सुरु गर्नको लागि अघिल्लो टिपसँग अलि सम्बन्धित छ, तर उत्कृष्ट खेलहरू फेला पार्नुले तपाईंलाई अझ धेरै मद्दत गर्नेछ र तपाईंको EV लाई ठूलो रूपमा वृद्धि गर्नेछ। पोकरमा अहंकारको लागि कुनै ठाउँ छैन, र यदि तपाइँ अझ राम्रो खेलाडीहरू खेल्न अडिग रहनुभयो भने, तपाइँ हराउनुहुनेछ। जति सरल। यदि तपाईं संसारको 10 औं उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ तर तपाईं भन्दा राम्रा नौ खेलाडीहरू विरुद्ध संघर्ष गरिरहनुहोस्, तपाईं ढिलो होस् वा ढिलो भइरहनु हुनेछ।
सत्य भनौं भने, यो प्रत्येक पोकर खेलाडीको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, तिनीहरू जतिसुकै राम्रो भए तापनि यसले तपाईंको जीत दर निर्धारण गर्नेछ। यसको शीर्षमा, तपाईंसँग राम्रो खेलहरूमा साना स्विङहरू हुनेछन् र धेरै छिटो दांव माथि सार्न सक्षम हुनुहुनेछ, जुन आफैंमा ठूलो बोनस हो। यदि तपाइँ कसरी उत्कृष्ट खेलहरू फेला पार्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, यहाँ तपाइँको लागि शीर्ष सुझावहरू छन्:
आफ्नो ढाँचाको लागि उत्कृष्ट खेलहरू खोज्नुहोस् (केही कोठाहरू नगद खेलहरूको लागि राम्रो छन् र अन्य MTT हरूका लागि)
तपाईंले शिखर ट्राफिक र थप मनोरञ्जन खेलाडीहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुहोस्
खेल्दा सुरक्षित हुन आफ्नो देशमा उपलब्ध उत्तम विकल्प खोज्नुहोस् र आफ्नो पैसा सुरक्षित गर्नुहोस्
धेरै एमेच्योर खेलाडीहरूले धेरै चौडा खेल्ने र धेरै टेक्सास होल्डम हातहरू खोल्ने ठूलो गल्ती गर्छन्। जब तपाइँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ कुञ्जी भनेको तपाइँको VPIP पोकर स्टेटलाई तल्लो छेउमा राख्न र फ्लप पछि धेरै कठिन निर्णयहरूबाट बच्नको लागि तपाइँको बलियो हातहरू मात्र खेल्नु हो। यसले तपाईंलाई कम खेल्न दिनेछ, तर अधिक आक्रामक रूपमा जब तपाईं आफ्नो हातलाई कार्यमा लिने निर्णय गर्नुहुन्छ। कम खेलहरूमा तपाईंका धेरैजसो विपक्षीहरूले धेरै समय अनियमित हातहरू खेल्नेछन् र यो पोकर टिप एक्लै लिएर तपाईंलाई तिनीहरूको अगाडि सुरु गर्न दिनेछ।
यो प्रयोग गरेर तपाईं पैसा गुमाउनु बिना र धेरै प्रभावकारी तरिकामा पोकर रणनीति सिक्न सक्षम हुनुहुनेछ। त्यसोभए आफूलाई उठाउनुहोस् र सट्टेबाजी गर्नुहोस् जब तपाइँ केवल कल गर्नुको सट्टा खेल्नुहुन्छ र तपाइँका विरोधीहरूलाई अधिकतम दबाब दिनुहुन्छ। राम्रो हात समात्ने प्रि-फ्लपको फाइदा तपाईसँग छ भनी थाहा पाउँदा तपाईले लामो समयसम्म तिनीहरूको कार्डको दायरा विरुद्ध जित्नुहुनेछ।
टेक्सास होल्डममा कुन हातहरू खेल्ने निर्णय गर्दा, तपाईंको स्थिति विचार गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक हुनेछ। तपाईंले पछिल्ला स्थानहरूबाट धेरै पैसा जित्नुहुन्छ त्यसैले त्यहाँबाट थप हातहरू खेल्ने प्रयास गर्नुहोस्। प्रारम्भिक स्थितिबाट धेरै कडा खेल्नुहोस्, BTN को नजिक जाँदै चौडा गर्नुहोस् र त्यहाँ थप भाँडाहरू चोर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अहिले सम्म पोकरमा सबैभन्दा लाभदायक स्थिति बटन (BTN) हो र त्यहाँ बसेर तपाईले अन्य कुनै पनि स्थानको तुलनामा धेरै हात खेल्न सक्नुहुन्छ। यो बानी पर्न केहि समय लाग्ने छ, तर कुन हातहरू खेल्ने निर्णय गर्दा सधैं आफ्नो स्थितिलाई ध्यानमा राख्नुहोस्।
तपाईको लक्ष्य पोकर रणनीति सिक्नु र सबै जानकारी हेर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो। त्यसैले भविष्यको लागि बहु-टेबलिङ छोड्नुहोस्, एउटै टेबलमा टाँस्नुहोस्, र तपाईंले प्राप्त गर्न सक्ने सबै जानकारीहरू अवशोषित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंका विपक्षीहरू कसरी खेलिरहेका छन् र उनीहरूका हातहरू शोडाउनमा छन् हेर्नुहोस्। आफ्नो स्थिति प्रयोग गर्न र कडा-आक्रामक दृष्टिकोण खेल्नमा ध्यान दिनुहोस् र यसले तपाईंलाई धेरै टाढा लैजान सक्छ।
भावनाहरू पोकर टेबलमा तपाईंको शत्रु हुन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ खेल्दा हार्दा रिस वा दुखी महसुस गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँले यसलाई पनि सामना गर्न आवश्यक छ, तर तपाइँ खराब महसुस गर्दा तपाइँको खेलहरू सुरु गरेर यसलाई अझ खराब नबनाउनुहोस्। हामी थकित, रिस वा रक्सी मातेको बेला मूर्ख काम गर्छौं र यसले हामीलाई धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छ। तपाईलाई नराम्रो लाग्दा आफ्नो खेलहरू सुरु नगर्नुहोस् र यो पहिलो हुनेछ, तर राम्रो पोकर खेलाडी बन्नको लागि धेरै ठूलो कदम। जब तपाइँ यी भावनाहरूसँग व्यवहार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तपाइँ यसलाई एक कदम अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ र खेल सुरु गर्नु अघि तपाइँको सत्रहरूको लागि तयारी गर्न केहि मिनेट लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले जित्ने हातमा हिर्काउनु पर्ने पोकर बाधाहरू र तपाईंले प्राप्त गरिरहनुभएको पोकर बाधाहरू जान्न आवश्यक छ। त्यसोभए तपाईले गर्नुपर्ने भनेको तपाईको भावनामा आधारित नभई तपाईको निर्णयहरू लिनु हो। भाँडोको सम्भावना के हो? यो एक अवधारणा हो जसले तपाईंलाई बुझ्न दिन्छ कि तपाईं आफ्नो हातले जारी राख्नको लागि सही मूल्य प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र सही निर्णय लिन मद्दत गर्नुहुन्छ। यहाँ एक द्रुत सूची सबैभन्दा सामान्य टेक्सास होल्डम हातहरू र कति आउटहरू छन् तपाईंले अर्को सडक सम्म एक विशिष्ट हात सुधार गर्नुपर्दछ:
पेट-शट -4आउट
दुई ओभरकार्डहरू -6आउट
ओपन-एन्ड सीधा ड्र - 8 आउट
फ्लस ड्र -9आउट
फ्लस ड्र र गट-शट - 12 आउट
सीधा फ्लश ड्र - 15 आउट
यदि तपाइँ अर्को सडकमा तपाइँको हात हिर्काउने वा2ले गुणन गर्ने अनुमानित सम्भाव्यता जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँ कति सम्भावना हुनुहुन्छ भन्ने नम्बर खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको हातलाई4ले गुणन गरेर तपाइँको हात सुधार गर्न कति सम्भावना छ भन्ने राम्रो संकेत हुन सक्छ। फ्लप देखि नदीमा आफ्नो हात सुधार गर्न गइरहेको छ।
यदि तपाइँसँग फ्लपमा 8 आउटहरू सहित खुला-अन्तको सिधा ड्र छ भने तपाइँ यसलाई घुमाउन लगभग 8*2 = 16% सुधार गर्नुहुनेछ र नदीको किनारमा आफ्नो सीधा वा 8*4 = 32% समय हिर्काउन सक्नुहुन्छ। । यी सटीक संख्याहरू होइनन् तर सही संख्याको धेरै नजिक छन् र यो पोकर रणनीति सिक्ने सबैभन्दा राम्रो र सजिलो तरिका हो। ड्रको साथ निर्णय गर्दा यसको बारेमा सोच्नुहोस् र यो पोकर टिपलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोस्।
जब तपाईलाई थाहा छ कि कति सम्भावना छ, तपाईले आफ्नो पोकर ह्यान्ड सुधार गर्नुहुनेछ जब तपाईसँग ड्र हुन्छ तपाईले आफ्नो विपक्षीलाई दायरामा राख्न सिक्नु पर्छ। यसले तपाईंलाई वास्तवमा कति बहिष्कारहरू छन् भनेर बुझ्न र त्यसपछि थप शिक्षित निर्णय लिन दिन्छ। धेरै कारकहरूले सुझाव दिन सक्छन् कि तपाइँको विपक्षीले कुन हात खेलिरहेको हुन सक्छ। यो एकदम कठिन र उन्नत विषय हो, तर तपाईं यसको एक साधारण संस्करण संग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूको स्थिति बारे सोच्नुहोस्, उसले त्यहाँबाट कुन हात खोलेर खेलिरहेको हुन सक्छ
तिनीहरूको पोस्ट-फ्लप कार्यले तिनीहरूसँग के हुन सक्छ भनेर सुझाव दिन सक्छ। बेटिंग वा जाँचले उसको बल वा कमजोरीलाई संकेत गर्न सक्छ र तपाईंले त्यो जानकारी खोज्नुपर्छ
बोर्ड बनावट पनि विचार गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण कारक हो। जोडिएका बोर्डहरूको तुलनामा मानिसहरूसँग सुक्खा बोर्डहरूमा धेरै बलियो हातहरू हुने सम्भावना कम हुन्छ
उनीहरूले निर्णय लिनको लागि लिने समय र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको साइजले हामीलाई थप जानकारी पनि दिन सक्छ
त्यहाँ विचार गर्न धेरै चीजहरू छन् र तपाईलाई यसको बारेमा सोच्न सक्षम हुन धेरै अभ्यास चाहिन्छ। यदि तपाइँ सुरुमा यसको साथ संघर्ष गर्नुहुन्छ भने आफैलाई दोष नदिनुहोस्। हामीले भनेझैं यो एक जटिल विषय हो, जसको बारेमा किताबहरू मात्र लेखिएका छन् त्यसैले एक दिन वा हप्तामा यसलाई मास्टर गर्ने आशा नगर्नुहोस्। खेल्न जारी राख्नुहोस् र सही तरिकामा पोकर रणनीति सिक्नुहोस्।
स्वतः निर्णय लिने बानीमा नपर्नुहोस्। यो एक ठूलो गल्ती हो कि उन्नत खेलाडीहरूले पनि धेरै समय बनाइरहेका छन् र पैसा जित्ने आफ्नो सबै मौकाहरू मारिरहेका छन्। आफ्नो समय लिनुहोस् र हामीले पहिले नै छलफल गरेका सबै सामानहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। विशेष गरी सुरुमा, यो एकैचोटि सबै कुराको बारेमा सोच्नु भारी हुन सक्छ, जस्तै तपाइँको स्थिति, पोकर ह्यान्ड रैंकिंग, विपक्षीको कार्ड र धेरै धेरै। त्यसकारण तपाईंले केवल एउटा टेबल खेल्ने पोकर टिपमा टाँसिनुपर्छ र तपाईंले आफ्नो निर्णयहरू गर्न आवश्यक पर्ने सबै समय लिनु पर्छ।
जब तपाइँ दांव माथि जानुहुन्छ र ठूला खेलहरू खेल्न सुरु गर्नुहुन्छ यो एक विकल्प हुनेछैन किनभने धेरै खेलाडीहरूले त्यहाँ धेरै आक्रामक खेल्छन् र थप ब्लफ गर्छन्, त्यसैले तपाइँले उनीहरू विरुद्ध कसरी खेल्ने भनेर सिक्नु आवश्यक छ। तर सुरुमा, यो रणनीतिमा अडिग रहनु तपाईको उत्तम शर्त हो। चाँडै, तपाईं माथि जानुहुनेछ र अलि बढी व्यावहारिक विरोधीहरूसँग खेल्न सुरु गर्नुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको खेललाई अर्को स्तरमा लैजान सक्नुहुन्छ तपाइँ तपाइँको विपक्षीहरु लाई कुचल गर्न को लागी तपाईले सोच्नु भएको थिएन कि सम्भव छ।
तपाईंले यो पोकर टिपलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ। जब तपाईंका निष्क्रिय विरोधीहरू जसले सधैँ फोन गरिरहेका छन्, कतैबाट पनि उठाउन थाल्छन्, तपाईंले धेरै र केही बलियो हातहरू पनि जोड्नुपर्छ। धेरै जसो समय एक जोडी हातहरू माथिको जोडी वा ओभरपेयर जत्तिकै राम्रो पनि गोबरमा जानुपर्छ। भर्खरै खेल्न सुरु गर्दा तपाईंलाई यी हातहरू छोड्न केही समस्याहरू हुनेछन्, तर यो एउटा कुरा हो जुन तपाईंले सिक्नु आवश्यक छ यदि तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ भने।
सबैभन्दा तल्लो खेलहरूमा खेलाडीहरू यति धेरै ब्लफ गर्दैनन् र लामो समयसम्म, तपाईंले यी स्थानहरूमा आक्रामकतामा एक जोडा हात जोडेर आफैलाई ठूलो फाइदा गर्नुहुनेछ। सबै विपक्षीहरू निष्क्रिय छैनन् र यदि तपाईं पागल वा धेरै आक्रामक र लगातार उठाउने व्यक्तिको बिरूद्ध खेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले यी हातहरू जोड्नु हुँदैन। तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ कि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका खेलाडीहरू छन् र तपाईंले वास्तवमै तिनीहरूको विरुद्धमा फरक रूपमा खेल्नुपर्छ।
यदि तपाइँ तल्लो दांवमा पनि खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले केहि मद्दत प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी उन्नत कार्यक्रमहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं जसले तपाईंलाई GTO पोकर रणनीति सिक्न मद्दत गर्न सक्छ, तर प्रत्येक खेलाडीसँग हुनुपर्दछ भन्ने सरल। ट्र्याकिङ सफ्टवेयर अत्यावश्यक छ किनभने तपाईं आफ्नो विरोधीहरूको तथ्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरू कसरी खेलिरहेका छन् भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई तपाइँले सामना गरिरहनु भएको विभिन्न प्रकारका विरोधीहरूलाई तुरुन्तै पत्ता लगाउन र तपाइँको पोकर रणनीति र त्यसको आधारमा निर्णयहरू परिवर्तन गर्न दिन्छ।
हामीलाई लाग्छ कि यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोकर सुझावहरू हुन् जुन तपाईंले सुरु गर्दा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यसले तपाईंलाई पोकर रणनीति छिटो सिक्न र खेलाडीहरूले गर्ने धेरै सामान्य गल्तीहरूबाट बचाउन मद्दत गर्नेछ।